Umaka: khulisa uhlu lwakho | Martech Zone
Umaka: khulisa uhlu lwakho
Enye yezindlela ezilula kakhulu zokuqinisekisa ukuthi ukulethwa kwe-imeyili yakho kuhlala kukuma okuhle - okusho ukuthi i-imeyili yakho iyifaka ebhokisini lokungenayo, hhayi ifolda engenamsoco, ngokuba nendlela ephephile necacile yokuqoqa amakheli e-imeyili. Noma yini engaphandle kwefomu lokungena okusobala ukuthi ixhumana nokunikezwayo futhi ibeka okulindelwe kokubhaliselwe (okuvezwe ngokuya ngemvume ebekiwe) kungathinta amathuba okuthi umamukeli angachofoza inkinobho ye-SPAM. Futhi nini
Ukukhula, ukukhula, ukukhula… wonke umuntu ubheke ukuthola abalandeli abasha, abalandeli abasha, izivakashi ezintsha, ezintsha .. ezintsha .. ezintsha. Kuthiwani ngezivakashi zakho ezikhona? Wenzani ukwenza ngcono ithuba lokubasondeza ekwenzeni ibhizinisi nawe? Sizenzele iphutha thina ngokwethu… sifuna ukusesha okungcono, ukukhushulwa ngokwengeziwe, ukuba khona kwabantu okwandayo. Imiphumela yayihlala izivakashi eziningi kusayithi kepha hhayi imali engenayo eningi ezansi nomfula. Ukukhulisa uhlu lwakho lwe-imeyili kufanele kube